Uhlelo Lokuvuselela Amankampani koBulawayo Lugalula Kwezombusazwe
Izakhamizi, amabandla ezombusazwe kanye labacubungula ezomnotho bathi ukuvalwa kwamafekithali okuqhubekela phambili koBulawayo kuphathelane lombango wezombusazwe ophakathi kwamabandla omathathu akuhulumende njalo akungeke kulungiswe ngaphandle ele Zimbabwe lize livume umbuso ozakusa amandla okuzibusa ezabelweni.
IStudio 7 iqhubekele phambili idingisisa ukuthi ngabe yini okubangela ukuvalwa kwamafekithali koBulawayo osekuleminyaka kuqhubeka kanye lokuthi kungaqedwa njani.
Abanengi abaxoxe leStudio 7 bathi lanxa like labakhona ithemba lokuthi amafekithali azavuselelwa ngaphansi kwesikhwama se Distressed and Marginalised Areas Fund (DMAF) ngomnyaka ophelileyo, sokusegcekeni ukuthi loluhlelo selugalule kwezombusazwe.
Ukuze sihlaziye udaba lokuvalwa kwamankampani koBulawayo, ugibbs dube oweStudio 7 uxoxe loMnu. Clemency Sibanda ingcwethi kwezenotho njalo osebenzela inkampani ye insurance loMnu. Jeoffrey Ndlovu owabumba inkampani yokwakha izindlu eselahlekelwe ngumsebenzi kontuthu ziyathunqa.
USibanda uthe okuhluphayo yikuthi amanye amankampani ayehluleka ukuthola izikwelede emabhanga ngenxa yokuthi kenelisi ukulungisa impahla elohlonzi yokuthengisela uzulu.
UNdlovu yena uthi okubhidliza amankampani la usola uhulumende ukuthi uyehluleka ukusungula uhlelo lwe DMAF.
Udaba Esilwethulelwe Ngu Thabang Mathebula
Ingxoxo Esiyenze LoMnu. Clemency Sibanda LoMnu. Jeoffrey Ndlovu